Kunzima ukuthola intombazane, kusukela ebuntwaneni, engazange iphuphe isambatho somshado esiphuthumayo, lapho ezozizwa njengendodakazi yenkosi yangempela. Abakhiqizi kanye ne-modistki abanamandla namandla amakhulu bazama ukuthola amaphupho amantombazane empilweni, futhi badale izingubo ezinhle kakhulu kuzo zonke izintandokazi.
Kuwo wonke amadolobha - amakhulu noma amancane - kukhona ngempela amakholi omshado. I-Togliatti (esifundeni saseSamara) ayikho into ehlukile. Lapha kunezinhlobo eziningana zezikhungo ezifanayo, lapho umakoti angathola khona konke - kusuka endongeni nasezicathulweni kuya ezelineni nezesekeli. Kulesi sihloko sizocabangela izidakamizwa zomshado ezidume kakhulu ku-Togliatti.
Abashadikazi abaningi bakhetha lesi sikhungo. Kukhona njalo iqoqo elisha lezingubo zomshado ezinhle. Futhi, i-salon inikeza izingubo zokuhlwa kusihlwa, okuzokwenzela iziqu. Ukukhetha enkulu izesekeli kuzovumela intombazane ngayinye ukuba ikhethe umhlobiso wayo.
Ku "Magnolia" ungathenga ingubo oyikhonzile noma uyiqashise, ushiye idiphozi. Izintengo zezingubo zivela kuma-ruble angu-17-60 ayizinkulungwane futhi zixhomeke kwisitayela, indwangu, ubucwebe kanye neqoqo. Ezinsukwini ezithile, ukuthengiswa kubanjwe lapha, lapho izindleko zokugqoka, izicathulo nezemihlobiso zinciphisa ngo-20-40%.
"Magnolia" itholakala ku: Lev Yashin street, indlu engu-14, esiteji sesine endaweni yokuthenga "Madagascar".
Wedding salon "Ukunqoba"
Esinye isikhungo esimangalisayo, iminyango evuliwe ngo-2005. Kusukela ngaleso sikhathi, isitolo asizange sibe namathayi okujabulisa isiqingatha esihle sabantu. Ukunakekelwa kwamantombazane kuyakudonsela ukugqoka izingubo ezinhle kakhulu zemikhosi ehlukene: imishado, izinkumbulo, izethulo, ukuya enkundleni yaseshashalazini. Inzuzo enkulu salon yindlela yokuhleleka ingubo ngesilinganiso ngasinye.
Ambalwa amashadi womshado ku-Togliatti angaziqhenya ngamagqoke akhethekile njengoba angathengwa "Ukunqotshwa". Ukuthakazelisa ngesitayela esiyingqayizivele, izindwangu zekhwalithi eliphezulu kanye nokuhlobisa okumangalisayo okumnandi. Lapha, abesifazane abagqoke ikakhulukazi abafuna ukufisa ifenisha efanelekile bazimisele ukudlula wonke amashadi womshado we-Togliatti.
"Ukunqoba" kufakwe ekhelini: I-70-vumela u-Oktyabrya street, indlu 47.
I-salon yomshado "iVersailles"
Lapha, amantombazane namantombazane banikezwa amaqoqo amasha kusuka kumakhukhuthri odumile. Izigqoko ezimangalisa zifanele imishado nanoma imiphi imisebenzi yebusuku. Amanothi amaningi atholakala kukhophi eyodwa, ebalulekile kwabesifazane abaningi. Egqoke "iVersailles", le ntombazane iyobe ingenakuvinjelwa.
Esikhathini, ungathenga izingubo zomsebenzi ezinhle, izicathulo zekhwalithi namabhlokwezi akhazimulayo. I-assortment yabo ecebile izobavumela ukuba bakhethe izinto ezifanele ngokuhambisana nethandwa kanye nezidingo zowesifazane. Kuyinto elula futhi kusukela ekubukeni kokugcina isikhathi nomzamo, ngoba ngeke kudingekile ukudlula wonke amashadi womshado we-Togliatti.
"I-Versailles" ingatholakala ku: Dzerzhinsky Street, indlu 21.
Amanye ama-salon of kusihlwa kanye nezingubo zomshado
Ku-Togliatti, izikhungo eziningi ezifana nalezi: i-salon "Diana" neVenice "emgwaqweni uDzerzhinsky, indlu 53. Isitolo somshado sigqoka futhi kusihlwa sigqoka" Zephyr " sibhekene nobuso be-Revolutionary, 5. Amanye amashaloni:
"Umlobokazi" - iminyaka engu-70 ka-Okthoba, 60.
"Umzila We-Silk" - I- Prospect Stepan Razin, 23.
"Elizabeth" - st. Marshal Zhukov, 1b.
"Lira" - isb. UDzerzhinsky, 21.
"Ingelosi" - is. Mira, 62.
Futhi nezinye izidakamizwa. Ngamunye wabo ulungele ukumangaza le ntombazane enezinhlobonhlobo kanye nobuhle bamamodeli.
Indlela flip amavidiyo efonini noma kwikhompyutha yakho
Rozebudnye Pelargonium: incazelo kanye Ukunakekela
Izindlela ze-seborrheic crusts "Mustela"
Esinokwethenjelwa utshani aerators
Indlela yokwenza ekutholeni determinant we matrix?
Abalingiswa be-Skyrim: Lydia
Izifo ezihlobene ngokunakekela kwezokwelapha: izinhlobo kanye ngezigaba
IRed Encwadi Khanty-Mansiysk. Khanty-Mansi Autonomous Area